I-Dragonfly Cottage Springbrook
Nethezeka ngokunethezeka nangesitayela, enhliziyweni yehlathi lemvula elingaphesheya. Ukude nje kude nemizila ehamba ngezinyawo esezingeni lomhlaba, ama-lookouts adonsa umoya nezimpophoma ezikhazimulayo. Kufakwe nedekhi enkulu yangaphandle ebheke umfula wethu kanye nezindawo zehlathi lemvula
Itholakala khona kanye e-Purlingbrook Falls, ukude nemizuzu nje kuphela ukusuka ezindaweni ezibuka umoya ezinhle kanye nehlathi lemvula lepaki kazwelonke. Izindlela zokuhamba emnyango wakho zikuyisa emhlabeni omangalisayo onqamula ihlathi lemvula, kusukela ezindaweni ezibukwayo ezingaphezu kwezimpophoma, ukuya emizileni emide ehamba ngaphansi kwezimpophoma futhi yehle iye echibini laseWarringa, indawo enhle yokubhukuda noma ipikiniki.
I-Springbrook iyidolobhana elincane elihlezi maphakathi nehlathi lamagugu omhlaba. Inezilwane eziningi zasendle zasendaweni nokuthula nokuthula ongavamile ukukubona lokhu eduze nendawo ephithizelayo njengeGold Coast (imizuzu engama-45 kuphela). Ngaphesheya komgwaqo kukhona indawo yepikiniki eholela kwezinye zezindlela ezihamba phambili zokuhamba entabeni. Kule mizila, kungakapheli imizuzu emi-5 yekotishi uzofinyelela izimpophoma ezimangalisayo zasePurlingbrook ezehla ngamamitha ayi-125 esigodini esingezansi. umzila omude uhamba ngaphansi kwezimpophoma wehle uye e-Warringa pool, indawo enhle yokubhukuda noma ipikiniki.
Ikotishi liyazenzela. Xhumana nathi ukuze uhlele ukuthatha okhiye.